192.168.8.1 - Tọgharia gị rawụta ka Ndi an-kpọ Ntọala
Nwere ike ịchọrọ Tinyegharịa router gị ka Ndi an-kpọ Ntọala ma ọ bụrụ na ịnweghị ike icheta paswọọdụ nchịkwa, ị nweghị ike icheta bọtịnụ nchekwa netwọti ikuku, ma ọ bụ na ị na - edozi nsogbu nsogbu njikọta.
The n'okpuru usoro adịghị ka dị ka Malitegharịa ekwentị a modem ma ọ bụ rawụta.
Usoro ntanetị dị iche iche - Ike, Soft, Ike demonstrationgba ígwè ngosipụta
Zọ kachasị mma iji tọgharịa ndị na-eme njem
Ọtụtụ dị iche iche rawụta nrụpụta ụzọ nwere ike iji dabere na ọnọdụ. A na-atụ aro ya bụ resets siri ike, nrụpụta dị nro na ịgba ígwè.
Esi Tọgharia gị rawụta ka Ntọala ndabara
Ntọala siri ike
A ike resetting bụ ihe kasị njọ ụdị rawụta nrụpụta & a na-ejikarị na-eji mgbe ihe admin okpu icheta igodo ma ọ bụ paswọọdụ & chọrọ ịmalite ọzọ na ntọala ọhụrụ.
Ntọgharị siri ike anaghị agbanwe ma ọ bụ wepu ụdị ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa. Iji gbochie nsogbu nke njikọ internetntanetị, wepu modem brọdband na rawụta tupu ịme nrụpụta siri ike.
Iji mee nrụpụta siri ike:
Gbanye na rawụta, gbanwee ya n'akụkụ nke nwere igodo Tọgharia. Tọgharia igodo bụ ma na ala ma ọ bụ azụ.
Obere oge na nkọ, dị ka ihe ntanye, jidere igodo Tọgharia maka sekọnd iri atọ.
Hapụ Tọgharia igodo & chere oge iri atọ maka rawụta iji tọgharịa kpamkpam & ike ọzọ.
Thezọ dochie bụ nrụzigharị nrụrụ siri ike 30-30-30 nke gụnyere ịpị igodo Tọgharia maka nkeji iri itoolu karịa iri atọ & enwere ike ịnwale ma ọ bụrụ na isi 30-sekọndrị anaghị arụ ọrụ.
Ọtụtụ rawụta creators nwere ike inwe ezigbo ụzọ iji tọgharịa rawụta, na usoro ndị ọzọ iji router nrụpụta nwere ike ịdị iche n'etiti ụdị.
Cygba igwe ike
Gbanyụọ & ịgbanwee na ike nke rawụta maara dị ka ike ịgba ígwè. A na-eji ya iji nwetaghachi nsogbu nke na-eme ka onye na-eme ihe ntanetị dobe njikọ dịka ọmụmaatụ nke nchekwa nke ime ma ọ bụ ọkụ. Mmemme ike anaghị ewepụ okwuntughe echekwara, ntọala ndị ọzọ echekwara ma ọ bụ igodo nche, yana router dashboard.
Iji mee ka okirikiri rawụta:
Gbanyụọ ike rawụta. Ọzọkwa gbanyụọ Power button ma ọ bụ wepu ike plọg.
Wepu batrị na ndị na-eme batrị batrị.
Ọtụtụ mmadụ na-echere sekọnd iri atọ na omume; ka ọ na-adịghị mkpa na-eche gabiga ụfọdụ sekọnd n'etiti disconnecting & reattaching rawụta ike plọg. Ma na ike resets, ịmaliteghachi ọrụ rawụta na-ewe oge ozugbo ike laghachiri.
Ezie na nsogbu nsogbu internet Njikọta nchegbu, ọ nwere ike inyere iji tọgharịa njikọ n'etiti modem & rawụta. Nke a nwere ike ịgụnye ịhapụ njikọ anụ ahụ n'etiti abụọ ahụ, ịghara ịchịkwa ngwanrọ ma ọ bụ ịkwụsị ike.
Tụnyere ndị ọzọ ụdị resets, adụ resets mmetụta ozugbo fọrọ nke nta ka ha na-adịghị mkpa rawụta ka Malitegharịa ekwentị.
Iji mee nrụpụta dị nro, kwụpụ eriri nke jikọtara rawụta na modem ahụ, wee jikọta njikọta oge ụfọdụ. Ole na ole ndị na-anya ụzọ nwere ike ịnwe ụzọ pụrụ iche iji mee nrụpụta dị nro:
Chọọ a Kwupu / Jikọọ igodo na dashboard. Nke a weghachite njikọ n'etiti onye na-ahụ maka ọrụ na modem.